I-Tesla ngeeyure eziphantsi, kunye nelahleko yezigidi kwaye ngenxa yeTesla Model 3 | Iindaba zeGajethi
UTesla akahambi kwinqanaba lakhe lokuqala. Usanda kupapasha iziphumo zekota zamva nje kwaye izinto azijongeka zilungile: Ilahleko ye- $ 619 yezigidi nenkcitho inyukile kunyaka ophelileyo. Konke oku kunye kuye kwabothusa abatyali mali kwaye uElon Musk kuye kwafuneka ukuba aphume aye kuchaza yonke into kancinci.
El I-Tesla Model 3 inoxanduva lwayo yonke into eyenzekayo. Le modeli yeyona ibalulekileyo kwaye ibalulekileyo kwinkampani yaseMntla Melika kule minyaka idlulileyo. Ngoba? Ewe, kuba ifuna ukukhuphisana namanye sedans kwimarike ngeemoto zombane ngokupheleleyo. Kwaye iyakwenza njalo, ingabhekiseli kuphela kuhlobo lwayo, kodwa ngexabiso elikhuphisanayo kunye noyilo olwenza ukuba ngaphezu komsebenzisi omnye athandane. Yiyo loo nto kwagqitywa ekubeni kubekwe usukelo lwemveliso yeveki yeeyunithi ezingama-5.000 XNUMX.
Akukho nanye kwezi efezekisiweyo. Ngaphezu koko, ngenyanga kaJulayi, njengoko kubonisiwe ku Mashable, ziiyunithi ezingama-30 kuphela ezihanjisiweyo. Kwaye ukusukela ngoko yonke into ibiyinto enzima: ukulibaziseka kwemveliso kwaqala kunye nokudilizwa okukhulu okwenziwa ukuba uphawu lwenze ibango elifanelekileyo kwaye, ngenxa yoko, ilahleko engaphezulu yemali.
Ngayo yonke le nto, uElon Musk ubala - amanani awaze aqinisekiswe- ukuba Bafuna ukufikelela kwi-5.000 ukuhanjiswa ngoMatshi wonyaka ozayo 2018. Ukufezekisa oku, ezinye iimodeli zakho zekhathalogu ziya kuchaphazeleka. Sibhekisa kwiimodeli zeTesla S kunye neTesla X. Njengoko sele kukhankanyiwe, zombini iimodeli ziya kufumana ingqalelo encinci kwaye imveliso yazo iya kuncitshiswa ukuya kuthi ga kwi-10%. Ngale nto unokwazi ukuba i-Tesla Model 3 ibaluleke kangakanani.
Ngoku, ayizizo zonke iindaba ezimbi kwinkampani. Kwaye kwakule nkcazo inye kubonisiwe ukuba zizonke i-250.000 yokuhanjiswa sele yenziwe ukusungulwa kwayo kwintengiso kwaye kulo nyaka 2017, iiyunithi ezingama-25.000 ezihanjisiweyo zeemodeli ezintathu zigqithile ezenza ikhathalogu ekhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Tesla ngeeyure eziphantsi, kunye nelahleko yezigidi kwaye ngenxa yeTesla Model 3 yayo